PixTeller waa aalad lacag la'aan ah oo kaa caawin doonta sameynta sawirada | Abuurista khadka tooska ah
PixTeller waa aalad lacag la'aan ah oo kaa caawin doonta inaad u qaabeyso sawirro shabakadahaaga bulshada
Qaar badan ayaa ah barnaamijyada naqshadeynta ee maanta jira. Mid kasta, oo leh qaab gaar ah, tijaabinaya mid kasta oo ka mid ah faa'iidooyinka iyo qasaaraha ay isticmaaleyaashu yeelan karaan, laakiin marka la soo koobo, runta ayaa ah in maanta aan haysanno tiro ballaaran barnaamijyo loogu talagalay in la naqshadeeyo. Qaarkood way ka fiican yihiin kuwa kale, qaarbaa qafiif ah, qaar kalena si dhakhso leh, qaarna waxtar badan, marka la soo koobo, qalab badan oo muuqaal ah.
Sidan oo kale, naqshad sawireed Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah edbinta ugu ballaaran ee shabakadda, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in ballaadhintiisu ay keentay ka-qaybgalka ballaadhan ee adeegsadayaal badan oo ka mid ah barnaamijkan.
La kulan qalabka bilaashka ah ee PixTeller
Marka, halkan waxaan ku soo bandhigi doonnaa barnaamij naqshadeynta websaydhka oo aad waxtar u leh oo miisaankiisu hooseeyo, laguna magacaabo PixTeller.
PixTeller waa barnaamij xoogaa ka duwan, oo lagu abuuray qoraaga Alexandru Roznovat, oo ah codsi u shaqeeya istuudiyaha istiraatiijiga ah ee dhakhsaha badan waana barnaamijkani wuxuu leeyahay taxane ah qaabab is beddel ah, oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay u samee nooc kasta oo sawirro ah shabakadahaaga bulshada habka ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Tani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee barnaamijkan websaydhka, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in maanta dadka isticmaala ay ku sifoobaan inay dalbanayaan marka loo eego muddada ay ku haminayaan inay ku helaan waxyaabaha ka soo baxa barnaamijyadooda.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad sameysato koonto, oo aan ka diiwaan gelin karno Google ama Facebook. Dareenkaan, waxaan heysan doonnaa ku dhowaad taxane naqshado horeyba u soo saaray barnaamijka la xiriira Facebook ama memes-yada aan ku arki karno gudaha Instagram. Marka koontada la abuuro, waan tagi karnaa tafatir dhammaan faylashayada waana in wax walboo aan ka helno interface-ka ay noo ogolaanayaan inaan ku shaqeyno qaababka vector-ka sida Adobe Illustrator, oo ah barnaamij ka kooban qeyb weyn oo ka mid ah Adobe Creative Cloud.
Nidaamkani waa mid aad u fudud, iyo sidoo kale raaxo.
Isdiiwaangelinta iyo la shaqeynta boggan waa gebi ahaanba bilaash, macno ahaan, waan awoodnaa samee nooc kasta oo sawir ah, iyo sidoo kale tafatirka tusaalooyinka asalka ah ee barnaamijku siinayo dadka isticmaala, taas oo noo ogolaaneysa inaan sameyno dhamaan isbeddelada uu isticmaalehu u tixgelin karo inay khuseyso horumarinta mashruuca.
Sidoo kale, waxaan sidoo kale ku badbaadin karnaa dhammaan mashaariicdan kumbuyuutarkayaga ka dibna waxaan u gelineynaa shabakadaha bulshada. Xaaladda keliya ayaa noqon doonta a calaamadeyn taasi waa inay ku socotaa muuqaalkeenna, innaga oo ka warramayna meeshii lagu abuuray.
Waxa kale oo jira habab lacag bixin ah oo loogu talagalay adeegsiga barnaamijkan, kaas oo, inta badan, kuu ogolaan maayo inaad tafatirto oo aad soosaarto shaqooyinka bilaa calaamadeynta laga bilaabo barnaamijka PixTeller. Sidoo kale, waxaa suurtagal ah in la abuuro sheybaarro kuu gaar ah, oo isticmaaluhu yeelan karo goor dambe, taasoo keeneysa moodello gebi ahaanba asal ah.
PixTeller Waxay sidoo kale la jaanqaadi kartaa kiniinnada iyo taleefannada gacanta, iyadoo ballaarinaysa hawlgalkeeda iyo adeegsiga shabakadda oo dhan, in kasta oo ayna ka mid ahayn barnaamijyada ugu adag ee naqshadeynta jira, PixTeller waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasheeda inay abuuraan sheybaarado la soo bandhigi karo iyo moodello aan waqti lahayn. on qalab waxtar leh oo wax ku ool ah ka hor xaalad degdeg ah.
PixTeller waa aalad laga heli karo webka, waana sababta ay ugu jirto gacanta dhammaan dadka laga yaabo inay qabaan a isku xirka internetka. Qalabkan, waad ku tafatiri kartaa sawirradaada oo dhan sidaad u jeceshahay, waxaad kaliya haysataa shuruudaha inaad astaan-biyood dul dhigto dhammaan howlaha la qabtay iyadoo la adeegsanayo barnaamijkan.
Hadaad qalab raadinayso helitaan deg deg ahSi fudud u laabo PixTeller waxaadna heli doontaa codsi aad u faa'iido badan oo dhakhso leh, diyaarna u ah si aad u fuliso dhammaan shaqooyinka aad u baahan karto wakhti kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » PixTeller waa aalad lacag la'aan ah oo kaa caawin doonta inaad u qaabeyso sawirro shabakadahaaga bulshada
Ka qaad jiirarka iyo cilladaha maqaarka adoo adeegsanaya Adobe Photoshop
6 Codsiyada khadka tooska ah loogu talagalay Tafatirka Sawirka Dufcadda